बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. ३६ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । सोही अवधिमा बैङ्कको चुक्तापूँजी २० प्रतिशतले बढेर रू.१२ अर्ब ५२ करोड र रिजर्भ कोषको रकम १६ प्रतिशतले बढेर रू. १० अर्ब २३ करोड पुगेको छ । बैङ्कले बैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. ६१ लाख ४९ हजार आम्दानी गरेको छ । सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ५७ करोड ४९ लाख रकम छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू.४२५
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्य : रू. १११३
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्य : रू.३६०
१८० दिनको भारित औसत व्यापार मूल्य : रू.४३६.०४
2017-12-15 - 7855 view(s) - abhiyan